Diiwaannada Dembiga • Maandooriyaha Inc
Home » Dambi
Lamaane u dhashay dalka Japan ayaa xabsiga loo taxaabayaa iyaga oo lagu eedeynayo in ay 800 oo farriimood oo pro weed ah ku soo direen internetka
Dambi, Sharci dejinta iyo Sharciga
Waxyaabaha ay ka koobnaayeen ayaa kaliya marin u heli karay ilaa 80 qof. Inaad ka hadasho weed onlineka markasta waxay noqon kartaa wax aan fiicneyn waqtiga ugu fiican ...
Europol labalaab: laba shabakadood oo waaweyn oo daroogo ah ayaa lakala qaaday
Dambi, Daroogooyinka, Wararka
Toddobaadkan, laba shabakadood oo waaweyn oo daroogo ah oo lala xiriiriyey maandooriyaha kookeynta ee waaweyn iyo tahriibinta xashiishadda ayaa la kala qaaday. Dhowr qof ayaa la qabtay ...
Kartuurtu waxay sii kordhayaan hal-abuurka leh tahriibinta meth crystal
Maandooriyeyaasha maandooriyaha loo galiyo Mareykanka ayaa si isdaba joog ah isu beddelaya. Maandooriyeyaasha maandooriyeyaasha ah ayaa ikhtiraacaya siyaabo badan oo hal abuur leh oo ay ugu tahriibiyaan daroogada. Taasi waxay calaamad u tahay Mareykanka ...
Xilli ciyaareedkii Labaad ee daahfurnaanta ayaa xiiseyneysa xilligii ugu horreeyay
Xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee 'Undercover' wuxuu ahaa mid si toos ah loo garaacay oo lagu toogtay saqafka Nederland oo ah taxanaha ugu daawashada badan Netflix. Sidoo kale…
Sigaar qiiq! Xannaanada hemp sharci-darrada ah waxaa laga helay kaniisad taariikhi ah
Boqortooyada Midowday - Boqolaal geed oo xashiishad ah ayaa laga helay kaniisad waqtigeedu dhamaaday oo ku taal tuulo yar oo ku taal magaalada Staffordshire. Kii hore…
Viva la France! Ama waxaa laga yaabaa inaysan u aheyn xamaasad cannabis.
cannabis, Dambi, Sharci dejinta iyo Sharciga
Howlgallo cusub oo looga soo horjeedo xashiishadda Faransiiska, oo la dagaallami doonta isticmaalka xashiishadda dadweynaha iyadoo lagu ganaaxay € 200 oo ...
Cawaaqibka COVID-19: coronavirus wuxuu sababaa koror ku isticmaalka daroogada oo leh cawaaqib weyn oo ka dhasha ka ganacsiga daroogada adduunka
Qiyaastii 269 milyan oo dad ah ayaa adduunka oo dhan adeegsaday daroogada 2018, taas oo 30 boqolkiiba ka badan tii sanadkii 2009, halka sida laga soo xigtay ...
Waqtiga Dheeraadka ah: Sida loo iibiyo Daroogada Khadka Tooska ah (Deg deg ah) Xilliga 2
Sabti-axaddu waa dhow geeska. Waqtiga ugufiican in lagu mashquulo ilaa iyo 2 ee…
Xashiishadda Xilliga Daaweynta Kansarka Naasaha: Maxay Yihiin Faa'iidooyinka?
Shirka Hogaamiyaasha Cannabis wuxuu dijitaal noqon doonaa Nofeembar 11 iyo 12